HomeAfaan OromooGaaffii Qeerroo Bilisummaa Oromoo har’a Walisootti Jaawar Mohaammad gaafatan
Gaaffii Qeerroo Bilisummaa Oromoo har’a Walisootti Jaawar Mohaammad gaafatan.
“Diinni Oromoo hidhatee Oromoo fixaa jiruu utuu agartanii WBO Waraana Oromoo irraa qawwee akka hiikkatee kaambii galu adda durummaan maaliif irratti hojjatte ?
Hardha yoo Oromoon wabii dhabee diinni hidhate Oromoo fixaa jiru maaltu sitti dhagayame ?
” ABOn akka hin suphamnetti caccabeera” jechaa akka turte niyaadatama. Hardha eessaa dhufeeti sodaatame?
Qaama biyya kana keessatti hidhatee jiru keessaa WBO akka hiikatee galu kan godhame akkamiini ?
Qawween WBO irraa hiikame Abbootii Gadaatti kennamee Oromiyaadhuma keessatti hafaa jedhame hin turree? Akkamiin qawwee sana Makkalakaayaan guurratte? Fkn Lixatti RIB qawwee keenya jedhee qawwee WBOrraa hiikame maqaa komand poostiin guurrate.
WBO cufti waliigalatti hin galle. Irra jireessatu Bosonatti hafe. Ammas Sagantaan WBO hiikkachiisuu inuma jiraa? Yoo jiraate Wabiin ummata kanaa Raayyaa Ittisa Biyyaa kan kunoo Ummata oromoo qabeenya gubu, mana gubu, namoota nagaa ajeesuu jechuudhaa? Fkn: Gujii keessaa qabeenyatu barbadaa’aa, namatu ajjeefamaa, manatu gubachaa jira.
Mootummaan amma biyya bulchaa jiru kun uummata Oromoo addaan qoodee Kibba Oromiyaa fi Lixa Oromiyaa irratti komand poostii labsee qawweedhaan bulchaa jira. Dhimmi kun ija siyaasaan yoo ilaalamu maal fakkaata?
Kibba Oromiyaa Godina Gujii keessatti saba Oromoo godinaan walitti buusanii uummata Oromoo Harargeerraa baroota dheeraa dura Godina Gujii keessa qubatan irratti lola kaasanii qe’eerraa buqqaasaa jiru. Isa kana maaliif hin balaaleffanne?
Dr. Abiy aangoo qabannaan “Oromoon bilisoomeera” jettan. Bara kanammoo “bara injifannoo Oromoo” jechuun walumaan kabajaa jirtu. Uummanni Oromoo kallattii hundaan miidhamaa jira; daangaan Oromiyaa cabaa jira. Jijjiiramni haga ammaatti mullate namni Oromoo ta’e aangoo qabachuudha.
Bilisuummaa Oromoo kana isin akkamitti ibsitanii bilisummaa lallabdan?
Hidhaafi ajjeechaan hin dhaabbanne. Amma nama 5000 ol kan ta’utu hidhamee jira. Bara kana erga Abiy aangoo qabatee nama 200 oltu waraana mootummaatiin ajjeefame. Dhimma hidhaafi ajjeechaa kana maaliif hin balaaleffanne? Maaliif hin gabaafne.
Baahirdaar deemtee “Finfinneen kan Oromoo qofa miti; siidaan aanolee utuu uummata hin mariisifamiin ijaarame diigamuu danda’a” jette. Abbummaa Oromoon Finfinnee irratti qabu alagaatti himuu maaliif sodaattu? Diinummaa habashaa maaliif dhoksitanii siidaa Aanolee diigna jettu?
Mootummaan kun yeroo tokko Lixa Oromiyaa irratti haleellaa xayyaaraa raawwate. Lammaffaarratti waraanni mootummaa dhukaasa summaa’aa fayyadamuun miidhaa qaqqabsiise Lixa Oromiyaatti. Kana maaliif calliftan?
Boorana keessaa aanaa Miyoo magaalaa Hiddii Loolatti waraanni mootummaa misirroo wal fuudhanii galan lamaan dabalatee nama shan ajjeesan. Kana caalaa gochi gara jabinaa maaltu jira? Maaliif calliftan?
Waraanni Mootummaa nama lama obbolaan lamaan Wallagga Bahaa Aanaa Eebantuutti ajjeesan. Kana caalaa gara jabina maaltu jira? Ajjeefamaafi hidhamaa maali jijjiiramni?
Sabboontonni Oromoo Qeerroon wareegama kaffalee qabsoo kana asiin ga’e hidhamaa, siyaasarraa dhiibamaa jira. Kanarratti maal hojjechaa jirtu?
Walumaagalatti akeeka Qabsoo Bilisummaa Oromoo kan galma ga’e tokko nutti himi?”
Mootummaan Meerre ree?? Gaafii ummataa maalif hin deebisu ?? Jecha Dr Mararaan Yaadadhe yookan ofiifbadu yookan Saba balleessuu jedhe. Lolli akkanaa daangaa oromiyaa cufa irratti gaggeeffamaa jira Amma kan walloo jenna malee Kibba Bahaa fi Kibba Oromiyaatti Gosoota Ollaa oromoo jiraanif Oromoo jidduutti Fanjiin Mootummaan Awwaale kan yeroo isaa eeggatee dhuwutu jira.
Ummanni Oromoo of hin gatinaa Of qopheessaa
Qeerroo har’a #Wallootti wareegaman – Ebla 7, 2019
1. Hasan Ammarii >>> Abiyoo irraa
2. Usmaan Burankaa >>> Caffaa Robit irraa
3. Abduu Ahmad Umaruu>>> Dalgoo irraa
4. Muhammad Ahmadee>>>Caakkaa irraa
5. Jamaal Haashum>>> Dareensa irraa
6. Ahmad Arusoo >>> Qori fursee irraa
Rabbiin kan jannataa isaan haa godhu.